Iwe unogona kushamiswa nezvakawanda zvinhu zvinovhiringidza mumwe munhu pane peji ravanosvika. Mabhatani, kufamba, mifananidzo, bara mabara, mazwi akashinga… ese anotora kutarisisa kwemushanyi. Nepo izvo zviri mukana kana iwe uchigadzirisa peji uye nemaune kuisa izvo zvinhu kuti muenzi atevere, kuwedzera zvisiri izvo chinhu kana zvekunze zvinhu zvinogona kutora mushanyi kure kubva kune yekufona-ku-chiito iwe chauri kuda kuti ivo vapfuure uye shandura.
Copyblogger yakaburitsa ino inonakidza infographic inogadzira fananidzo pakati pemushanyi pane yako saiti uye mumwe munhu anoteedzera mafambiro, 9 Kumhara Peji Goofs izvo Zvinokuita Iwe Kurasika Bhizinesi. Ini ndinonyatsoda ichi fananidzo nekuti chakakodzera kwazvo sezvaunofunga nezvenzendo dzauri kutora.
Chinhu chekutanga chatinoita parwendo mepu mavambo nekwaari kuenda, tobva tapa nzira inoshanda kwazvo iri pakati. Paunenge uri kugadzira mepu yako yekumhara. Heano 9 zvakajairika zvikanganiso iwe unogona kugadzira paunenge uchigadzira mapeji ekumhara (asi unofanirwa kudzivirira):